Bayern Munich Oo Qorsheyneysa Inay U Dhaqaaqdo Mid Kamid Ah Xidigaha Ugu Muhiimsan Chelsea
HomeWararka CiyaarahaBayern Munich oo qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo Mid kamid ah Xidigaha ugu Muhiimsan Chelsea
September 9, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Bayern Munich ayaa lagu soo waramayaa in ay qorshaynayso in ay u dhaqaaqdo weeraryahanka kooxda chelsea ee Timo Werner inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga dambe.
25 jirkaan ayaa si joogta ah ugu ciyaarayay Blues intii lagu guda jiray ololihii 2020-21, isagoo saftay 52 kulan tartamada oo dhan, isagoo dhaliyay 12 gool iyo 15 caawin, laakiin wuxuu ku dhibtooday qaab ciyaareed intii lagu jiray marxaladaha xilli ciyaareedka.
Ku soo laabashadii Romelu Lukaku ee Stamford Bridge ayaa la micno ah in Werner aysan u badneyn in la siiyo fursado badan oo dhexda ah, halka uu ka hooseeyo booska boosaska Lukaku oo£ 97.5m kaga yimid Inter Milan.
Sida laga soo xigtay Sport1 , tababaraha Bayern Julian Nagelsmann , oo ku maamulay xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka kooxda RB Leipzig, ayaa aad u doonaya inuu dib ula midoobo weeraryahanka Allianz Arena.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Nagelsmann uu weli heshiis joogto ah kula jiro ciyaartoygiisii ​​hore, kaasoo loo arko inuu noqon karo bedelka Robert Lewandowski .
Werner ayaa laba kulan oo Premier League ah u saftay Blues xilli ciyaareedkan laakiin wuxuu ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii Liverpool ka hor fasaxii xulalka.